Shabaab oo u muuqdo kuwo wax ka bedelay taatikadii qaraxyada | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shabaab oo u muuqdo kuwo wax ka bedelay taatikadii qaraxyada
Shabaab oo u muuqdo kuwo wax ka bedelay taatikadii qaraxyada
Qaraxyadu waxay qayb ka yihiin dagaalka jabhadaynta ah, ee ay dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeysay maleeshiyada Al Shabaab ka wadeen Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya, iyagoona maraxyado kala duwan soo maray.
Bilowgiiba Shabaabku waxa ay caan ku noqdeen weerarada loo yaqaano keli-duulka, ee xubnahooda isugu qarxinayaan xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo hoteelada iyo xarumaha hay’adaha dowladda. Inta ay taariikhdu qoreyso is-qarxintaasi waxay ku dileen Wasiiro, Xildhibaano, Saraakiil, Gudoomiye-yaal iyo dad kaloo rayid u badan.
Mar qura ayaa lagu soo baraarugay in ay qaraxyadaasi u bedeleen gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyo ee lagu weerarayo hoteelada iyo xafiisyada dowladda, dabadeedna rag diyaarsanaa ay weerar toos ahi ku gelayaan goobahaasi.
Qorshooyinkoodaasi oo aad mooddo in wa-xoogaa dersi laga bartay waxay keentay inay mar kale bedelaan taatikadii qaraxyada. Waxaa xigtay qaraxyada/miinooyinka lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay, iyaga oo markaasi beegsanaya shakhsiyaadka ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan, kuwaa oo nooc kastaba leh.
Shabaabka oo dareemay in la kordhiyay barraha amniga lagu suggo ee Caasimadda Muqdisho ayaa sanadkii 2020 bilaabay inay si dardar leh magaalada uga gaystaan qaraxyada la dhigo hareeraha wadooyinka, ee lala beegsanayo gaadiidka ay la socdaan Saraakiisha Ciidamada, Gudoomiye-yaasha Degmooyinka iyo Shaqaalaha Rayidka ee Dowladda Federaalka. Qaraxyadaasi waxay socdeen illaa sanadkii xigay ee 2021.
Bishii November waxa ay soo kordhiyeen ayaa ah in kuwa ku qoran is-qarxinta ay qabsadaan, oo ay ku dhegaan daaqadaha gaadiidka ay wataan kuwa bartilmaameedka u ah. 20-kii bishaasi nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa ayaa qabsaday daaqadda gaari ay la socdeen Agaasime-yaashii Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka, Cabdicasiis Maxamuud Guuleed (Afrika) iyo Sharmaarke Maxamed Warsame. Alle ha u naxariistee Cabdicasiis Afrika ayaana ku geeriyooday weerarkaasi oo ka dhacay Degmada Boondheere ee Waqooyiga Muqdisho, halka Sharmaarke Maxamed uu dhaawac culus ka soo gaaray.
Axaddii shalay, sidaan oo kale nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay qaybtii uu gaarigiisa ka saarnaa Afhayeenka Xukuumadda, Maxamed Ibraahim Macalimuu, oo xilligaa marayay agagaarka Isgoyska Dabka. Macalimuu ayuuna dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi.
Tani waa nooc ku cusub weerarada ismiidaaminta ay Shabaabku in muddo ahba ka gaysanayeen dalka, waxayna kordhin kartaa dareenkii baqdinta ku dhisnaa, ee markii horeba laga qabay falalkooda argagixiso.
Is bedelada ay ku sameynayeen qaraxyadooda waxaa barbar socday gaadiidka miineysan ee lagu dhufanayo gawaarida kale, ee ay masuuliyiintu la socdaan, isla-markaana adeegsanaya wadooyinka.
Hay’adaha amniga ee Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada oo la fahamsan yahay inaanay galaangal badani ku dhex lahayn Shabaabka dhexdiisa ayaa lagu eedeeyaa inay aalaaba ku fashilmaan ka hortagga dhagaraha ay maleygayaan mintidiinta, waana xilli dowladihii dalka isaga kala dambeeyay lagu dhaliilay inaanay waxba ka kororsan qarax illaa qarax kale.
Shabaabka oo doodoodu tahay inay dalka ku xukumayaan Shareecada Islaamka ayaa haddana, sida muuqataba aanay jidkeediiba haynin, marka aad eegto bilaa qiilka, ee ay maalin kasta u daadinayaan dhiigga ummadda Muslimiinta. Culimada Soomaaliyeed ayaa horaan naqdiyay oo wax aan bannaanayn ku tilmaamay dagaalka ay dalka ka wadaan, inta badan shacabkuna waxay u arkaan cadowga keliya ee muuqdo, ee ay maanta Soomaali leedahay.
Previous articleRooble oo isbitaalka ku booqday Maxamed Ibraahim Macalimuu
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya oo teleefanka kula hadlay Vicky Ford